Radical Ultra-Nationalist Rakhine leader U Aye Maung’s inflammatory words | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« I don’t believe that Rakhines in Malaysia are planning to kill or kidnapp Muslims and are trying to start Anti-Muslim Riots?
Rakhine Authorities could not fool the International Community »
… မဲရဖို့အတွက် လူတွေသွင်းခဲ့တဲ့ အမှားပဲ။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မှားခဲ့တာတွေ အများကြီးပဲ။ သတိမရှိခဲ့တဲ့ အခါကျတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ကျဆုံးမလို ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုက်နက်မြေကို တစ်လက်မမှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် အမွေပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေ တစ်လက်မမှ မပေးဘူး။ အဆုံးရှုံးမခံဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်သွားမှာပါ” ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြောဆိုသည်။ ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ထုတ် True News ဂျာနယ်ပါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ စစ်တွေမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမှ ကောက်နုတ်ချက်မှ
Tags: Animation, Arts, Burma, Muslim, Rakhine people, Rakhine State, Rohingya people, Voice Actors
This entry was posted on June 14, 2012 at 10:47 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.